एभिन्युज टेलिभिजनमहासमिति बैठक बारे निर्णय लिन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोली - एभिन्युज टेलिभिजन
साविक विजेता लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमै स्तब्ध
वस्तुगत तथ्यांकले सार्थक परिणाम दिन सक्छ : मुख्यमन्त्री राउत
यू–१८ साफ फुटबलका लागि नेपाली टोली घोषणा
समाजमा हुने उछृङ्खल खालका गतिविधिले मुलुकलाई नै विभाजनतिर लैजान्छ : मन्त्री भट्टराई
सेयर बजारमा लगानी बढाउन वित्तिय संस्थाहरुलाई अर्थमन्त्री खतिवडाको आव्हान
महासमिति बैठक बारे निर्णय लिन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भोली
19 Kartik 2075 Monday 2:06 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले महाधिवेसन भएको झण्डै ३ वर्षमा यहि मंसिर पहिलो साता गर्ने भनेको महासमिति बैठक सर्ने वा नसर्ने भन्नेलगायतका विषयमा भोली मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने भएको छ । गत भदौ ९ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौंमा महासमितिको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर तयारी नपुगेका कारण महासमिति बैठक सर्ने कांग्रेसका नेताहरु बताउँदै आएका छन् । कात्तिक १६ गते आयोजित चियापान समारोहमा कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा महासमिति बैठक सर्ने बताएका थिए ।
यता कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने सर्ने सम्भावना अहिलेसम्म नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट लगातार विधानको मस्यौदामाथि छलफल गरेर कात्तिक २७ गतेसम्म विधान पारित गर्न सके महासमिति बैठक नसर्ने उनको भनाइ छ ।
‘‘विधानको ड्राफ्टमाथि भोलिबाट लगातार २७ गतेसम्म छलफल गरेर विधान फाइनल गरे महासमिति सर्दैन र सर्ने सम्भावना अहिलेसम्म छैन,’’ मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘‘विधान फाइनल गर्न केन्द्रीय समितिमा ८–१० दिनै लाग्ने भो भने पनि महासमिति सर्ने–नसर्ने बारेमा भोलिको बैठकले तय गर्छ ।’’
किन सर्दैछ बैठक ?
विधान संशोधन मस्यौदा समितिले विधान संशोधनका लागि सातवटै प्रदेशमा छलफलका साथै विभिन्न क्षेत्रका वैद्धिक व्यक्त्तित्वसँगको राय सल्लाह लिएर काम अगाडि बढाएको छ । तर, पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्षबीच मुख्यगरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति जनाको बनाउने भन्नेमा विवाद देखिएको छ ।
विधान परिर्मा्जित मस्यौदा पेश गर्दा पनि मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन पद्धती अहिलेकै कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, बैकल्पिक प्रस्तावका रुपमा पदाधिकारी बढाउने र सबै निर्वा्चित हुने पनि राखिएको छ ।
यहि क्रममा संस्थापन पक्षले सभापतिलाई थप शक्तिmशाली बनाउने कसरत गरिरहेको छ । तर, संस्थापन इतर पक्ष त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । संस्थापन पक्ष महासमितिमा पनि हेटौडामा भएको जिल्ला अध्क्षयको भेलामा झै प्रस्तुत हुने तयारी गर्नेका लागि बैठक सार्न लागेको इतरपक्षका नेताको बुझाई छ ।
तर, संस्थापन पक्षका नेताहरु भने विधानमाथि पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक छलफल गर्न बैठक केही समय सार्न लागेको बताउँछन् ।
यता नेविसंघमा ३२ वर्षे उम्मेर हदबन्दी लागु गरिएकोबारे जनाएको नोटअफ डिसेन्टको सभापतिले बेवास्ता गरेको भन्दै इतर पक्षका नेताहरु पौडल, पूर्वमहामन्त्री द्वय प्रकाशमा सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता अर्जुननरसिंह केसी महासमिति बैठकमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत हुने दाउमा छन् ।
देउवाले महासमिति बैठक सार्ने हल्ला चलाए : पौडेल
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अझै नसच्चिएको आरोप लगाएका छन् । नेता पौडेलले सर्ने भन्दै देउवाले एकपक्षीय हल्ला फिजाएको आरोप लगाएका छन् । ‘पूर्वनिर्धारित महासमिति भेला मंसिर ५ गतेबाट बोलाइएको छ । तर, त्यो भेला सर्नसक्ने भनेर हल्ला चलाइएको छ । त्यो कसले चलाएको भन्ने तपाइँले बुझिहाल्नु भएको छ । यसबारे न मसँग सभापतिजीले छलफल गर्नुभएको छ ? न पार्टीमा नै ? यसरी एकपक्षीय निर्णय गर्दै जानु राम्रो होइन’ पौडेलले रातोपाटीलाई आइतबार संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै भने ‘मसँग सभापतिले यसबारे कुनै कुरा गर्नुभएको छैन ।’
आफू तोकिएकै मितिमा महासमिति बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको भन्दै पौडेलले पार्टीका हरेक निर्णय सार्दै र धकेल्दै लैजादा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् । ‘नेविसंघको हालत त्यस्तै छ । प्रत्येक वर्षमा हुनुपर्ने महासमिति तीन वर्षमा हुन लाग्दा पनि सार्न खोजिँदैछ यो के गर्न खोजिएको हो मैले बुझ्न सकिनँ’ पौडेलले देउवालाई प्रश्न गरे ।
संखुवासभा : संखुवावासभाको खाँदबारीबाट दुई जना बिरामी लिएर गएको बोलेरो गाडी अक्करको भीरबाट अरुण नदीमा खस्दा ६ जना बेपत्ता भएका ...
1 Ashwin 2076 Wednesday 8:20 am
1 Ashwin 2076 Wednesday 7:50 am
1 Ashwin 2076 Wednesday 7:46 am
31 Bhadra 2076 Tuesday 8:55 pm
नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्तालाई हतियारसहित पक्राउ
31 Bhadra 2076 Tuesday 8:01 pm